Lola Tigiraay: Tigiraayitti haleellaa konkolaataarratti raawwatameen lubbuun barattoota ja’aa darbe – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooLola Tigiraay: Tigiraayitti haleellaa konkolaataarratti raawwatameen lubbuun barattoota ja’aa darbe
BBC Afaan oromoo | Guraandhala 22, 2021
MADDA SUURAA, MEKELE UNIVERSITY
Haleellaa hidhattoota hin beekamneen barattoota eebba Yunvarsii Maqaleetti ture hirmaatanii gara Finfinneetti imalaa turan irratti raawwateen lubbuun barattoota jahaa darbuu namoonni lubbuun hafan BBCtti himan.
Haleellaan kun bakka Addii Mesnoo jedhamutti kan raawwate yoo ta’u, konkolaataan isaan keessa turan namoota 41 qabatee ture jedhan.
Haleellaa barattoota kanneen irratti raawwatame ilaalchisee qaamni itti gaafatama fudhate kan hin jirre yoo ta’u, mootummaan naannichaas ta’e kan Federaalaa dhimma kanarratti ibsa kennan hin qaban.
Kanneen lubbuun hafan keessaa tokko kan ta’e barataan Yunvarsiitii Addigiraat maqaan isaa akka hin eeramne barbaadu BBCtti akka himetti, osoo haleellaan kun isaan irra hin gahiin dura karaan itti cufamee kan ture yoo tahu, humni ittisaa erga bansiiseefii booda imala isaanii eegalan.
Barataan gosa barnootaa Xiinsamuutiin Yunvarsiitii Addigiraatirraa eebbifame kun, haleellaa qaqqabe kanaan barattoonni ja’a ajjeefmanii torbarra ammoo miidhaan guddaan qaqqabuusaa BBCf ibseera.
Barattoota miidhaan irra gahe keessaa tokko ta’uu ibsuun, “Anarrallee miidhaan xiqqoo miillakoorra gaheera,” jedha barataan kun.
Haleellaan yoo xiqqaate akka lubbuun barattoota ja’aa darbuufi kanneen 10 ol ta’an ammoo miidhamaniif sababa ta’e kun, guyyaa saatii 7:00 irratti naannoo Tigiraay, magaalaa Hiwwaannee bakka Addii Mesnoo jedhamutti raawwachuusaa barattoonni konkolaaticha keessa turan BBCtti himaniiru.
Pirezidantiin Kaawunsilii Barattootaa Yunvarsiitii Maqalee Abrahalley Arrefaayinee odeeffannoo barattootarraa argadhe jedhu eeruun BBCtti akka himetti, lubbuun barattoota torbaa darbuufi 10 ol kan ta’aniirra ammoo miidhaan qaqqabuu mirkaneeffateera.
Haleellaa raawwatame kanaan barattoota gaggeessaa kan turan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lama ajjeefamuusaanii kan dubbatu Pirezedaantiin Kaawonsilii barattootaa kun, barattoonni miidhaan irra gahe akka wallaansa argataniif Hospitaala Waldiyaa geeffamaniiru jedheera.
Hospitaalota barattoonni kunneen wallaansaaf itti geeffaman keessaa tokko kan ta’etti gaggeessaan Hospitaala Qobbaa Obbo Kaasahun Addisuu BBCtti akka himanitti, Jimaata galgala barattoonni 35 gara hospitaala isaanii akka dhufan eeruun, isaan keessaa 12 miidhaan kan irra gahedha.
Haleellaa qaqqabe kanaan warra miidhaman keessatti dubartoonni akka argaman kan ibsan Obbo Kaasahun, harkasaanii, sarbasaniifi teessumasaaniirra rasaasaan barattoota dha’aman arguu eeruun miidhan isaaniirra gahe garuu hamaaf dabarsee kan isaan kennu miti jedhaniiru.
Barattoonni miidhaan irra gahe hospitaalatti wallaansi taasifameef Dilbata kaleessaa karaa Yunvarsiitii Waldiyaatiin gara maatiisaaniitti akka geeffaman dabalanii dubbataniiru.
Obbo Kaasahun warra haleellaa qaqqabeen lubbuunsaanii darbeera jedhaman keessa kan reeffisaanii gara hospitaala isaaniitti geeffame, yookaan ammoo miidhaan irra gahee dhufaniillee wallaansarratti kan lubbuun darbe akka hin jirre BBCf mirkaneessaniiru.
Barattoonni haleellaan irratti raawwatame kunneen eebba barattootaa torban darbe magaalaa Maqaleetti gaggeefamerratti hirmaatanii gara naannoosaaniitti deebiyaa warra turanidha.
Gama kaaniin, xumura torban darbee kana rogeessi Yamaanee Niguseen jedhamuuf sosochii ‘Fanqil’ jedhu hudeessee ture magaalaa Maqalee alatti ajjeefamuun gabaafameera.
Yamaanee Nigusee TPLF qeequun kan beekamu yoo ta’u, ajjeechaa irratti raawwateef mootummaan, ”hidhattoota TPLF” himate. Akkitti ajjeefame garuu ifa miti.
Bulchiinsi yeroofii naannoo Tigiraay torban darbe ibsa baaseen uummanni akka hin tasgabboofne kan godhan ”humnootni bittinnaa’anii hafan” jiru jechuun uummannis akka dahoo hin taaneef akeekkachiisera.
Tarkaanfii fudhatamuun uummatni akka hin miidhamneef humnoota ”badii” jedhe kanneen dabarsanii akka kennan yookaan nageenya isaaniif jecha humnoota kanneen irraa akka of eegan akeekkachiisee ture.
Torbanuma darbe sararri daddabarsa humna elektirikaa addaan cituun yeroo lammaffaaf tajaajilli ibsaa naannichaa addaan cituu isaa humni ibsaa Itoophiyaa beeksisee ture.
Dhaabbatichis tajaajilli ibsaa kun kan adda cite humnoota ”harcaatuu” TPLF jechuun kan waamu naannicha keessatti mootummaa Federaalaa waliin wal lolaa kan turaniin tahuu ibse.
Humnoonni TPLF Sadaasa darbe buufata waraanaa Federaalaarratti haleellaa erga raawwatanii booda lolichi eegaluun isaa ni yaadatama.
Lola torban sadii booda mootummaan Federaalaa Maqalee to’achuun injifannoo labsus ammallee darbe darbe walitti dhukaasun akka jiru ni gabaafama.
Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii Dhihaa Haleellaa Isaa Gad Jabeesse
Waraanni Bilisummaa Oromoo Zoonii Dhihaa Haleellaa Isaa Gad Jabeesse [SQ, bitootessa 18,2018] Gaachanni uummata Oromoo…